Tyke, usetyenziso lokuthatha amanqaku oya kuhlala ufumaneka ngalo kwimenyu yebar | Ndisuka mac
Tyke, usetyenziso lokuthatha amanqaku oya kuhlala ufumaneka ngalo kwimenyu yebar
URuben inyongo | | Ezinye iiNkqubo zeMac
Inyaniso yileyo ngalo lonke ixesha sisusa iphepha elininzi ebomini bethu. Oku akuncedi kuphela ekubeni nemeko-bume enocwangco, kodwa sikwanceda nendawo esingqongileyo. Eziofisini eyona nto iphambili kwezi ncwadi zokubhala zincinci okanye ezaziwayo "Post-its" apho sinokubhala ngokukhawuleza amanqaku ethu xa sisemnxebeni okanye izikhumbuzo ezilula ezifana nenombolo okanye ipassword.
Icala elisezantsi loku kukuba xa iphepha liwa, asizukuba nenye into esinokuyenza. Oku kungongezwa nge usetyenziso lwamahala Tyke. Isicelo esincinci senqaku esifakela kwi-Mac yakho kunye Iyabonakala kwimenyu yebar kwikhompyuter yakho. Nje ukuba ifakwe, i-icon encinci ngohlobo lwencwadana yokubhaliweyo iya kuvela kwibar yakho kwaye kuphela ngokucofa kuyo ibhokisi iya kuvela apho ungathatha khona amanqaku akho.
Ukusebenza kwayo kulula kwaye akuvumeli ukwenza iifrills. UTyke ukhonza into enye kuphela: thatha izichaso ezikhawulezayo kwaye uzigcine apho de sigqibe ekubeni sizicime. Kwakhona, into ebaluleke kakhulu kukuba siyazi ukuba la manqaku akufuneki ahlale ebonakala. Ngamanye amagama, umphuhlisi uyazi ukuba kukho ulwazi olubuthathaka kwaye yeyiphi indlela ebhetele kunokwazi ukufihla izichazi zethu nangaliphi na ixesha. Oku kuya kuba lula njengokucofa nakweyiphi na indawo kwiscreen kwakhona ukufihla inqaku. Ukuze iphinde ivele, kufuneka nje ukuba ucofe kwakhona kwi icon kwibar ephezulu.
Ngoku, njengoko besitsho ICultofMac, kuphela "kodwa" uTyke unayo yile akunakwenzeka ukuyivula ngonqumlo lwebhodi yezitshixo; Kuya kufuneka usoloko usebenzisa imouse. Ukusuka kwisango babonisa enye indlela eya kwiTyke -SwiftText-, eyongeza indlela emfutshane yebhodi yezitshixo, kodwa endaweni yoko inexabiso lama-2,29 euros ngeVenkile yeApple yeMac. Khumbula ukuba iTyke ayikhutshelwanga ngeqonga le-Apple, ke kuya kufuneka ukhethe ukhetho lokufaka amandla isoftwe labathathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Ezinye iiNkqubo zeMac » Tyke, usetyenziso lokuthatha amanqaku oya kuhlala ufumaneka ngalo kwimenyu yebar
USergio Rivas sitsho
Ewe, ndiyifumana le app ikhululekile kakhulu, inyani kukuba licebo elihle kakhulu.
Phendula uSergio Rivas
Kukho enye indlela, ngokokwazi kwam kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwakubizwa ngokuba yi-tmpNote enendlela emfutshane yebhodi yezitshixo kwaye ikwiAppStore
Phendula kwi rk
I-Apple Pay igubungela iipesenti ezingama-90 zeentlawulo ezenziwe ngaphandle konxibelelwano
I-Telegram ye-Mac ihlaziywa kwakhona, ngeli xesha i-Force Touch yongezwa